Harry Kane oo loo sheegay inuu haysto fursad dahabi hadii oo ku biiro kooxda Real Madrid
Home Horyaalka Ingiriiska Harry Kane oo loo sheegay inuu haysto fursad dahabi hadii oo ku...
Harry Kane waa inuu ka tago Tottenham kuna biiro Real Madrid haddii uu doonayo inuu gaaro heerka Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
Waa sida laga soo xigtay ciyaaryahan hore ee usoo ciyaaray labada naadi ee Jonathan Woodgate, kaasoo kula taliyay weeraryahanka Tottenham inuu qaato fursad uu ugu biiri karo Madrid haddii ay dhacdo.
“Haddii Real Madrid ay kusoo raadiso adiga – gaar ahaan Harry Kane – waa inuu baxo.
Haddii uu doonayo inuu koobab ku guuleysto oo uu gaaro meesha xigta ee Messi, Ronaldo iyo ciyaaryahanka noocaas ah, waa inuu aadaa, ”Woodgate wareysi uu siiyay wargeyska Astro.
In kasta oo Spurs wax badan laga horumariyay Jose Mourinho isla markaana ay u muuqato inay awood u leedahay inuu kordhiyey qandaraaska xidiga, Woodgate wuxuu aaminsan yahay in Kane uusan fursad u helin inuu koobab kula guuleysto kooxda ka dhisan Waqooyiga London.
“Ma arko isaga oo ku guuleysanaya horyaalka Premier League, ma ahan xilli ciyaareedkan iyo xilli ciyaareedyada soo socda.
Waxay heystaan ​​dhismo aad u badan oo ay ku sameeyaan si ay tartan ula galaan kooxaha Liverpool, Man United iyo Man City.
Aniga ahaan, hadii uu doonayo ku guuleysiga European Cup, wuxuu fursad u helay inuu ku qaado Real Madrid. ”
Mid ka mid ah weeraryahanada ugu awooda badan aduunka, Kane waa badeecad aad loo raadinayo oo lala xiriiriyay kooxo dhowr ah oo caan ah, oo ay ku jiraan Real Madrid, Manchester City iyo PSG. 27 jirkaan ayaa la fahamsan yahay inuu wadahadal kula jiro heshiis cusub oo uu kusii joogayo Spurs iyadoo ay xiiseyneyso City.
City ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay bixiso wax ka badan 100 milyan oo ginni ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England, kaasoo gaaraya €120 milyan, waana ciyaaryahanka seddexaad ee ugu qiimaha badan adduunka marka loo eego qiimeynta transfemarkt.com
Iyadoo 33 jirka Karim Benzema uu ku dhowyahay dhamaadka qandaraaskiisa sanadka 2022, Real Madrid ayaa isha ku heysa inay hesho bedelkiisa mustaqbalka fog.
Inkastoo Kane loo arki karo inuu yahay musharax bedeli kara halyeeyga reer France ee Bernabéu, hadana mudnaanta koowaad ee Los Blancos waa xiddiga PSG Kylian Mbappé iyo xiddiga Dortmund Erling Haaland.
Previous articleDa,yarka Mucjisadaa Simons oo lagu soo daray kooxda heer koowaad ee PSG & Neymar oo wali maqan
Next articleManchester City oo ku dhawaaqday in Sadex Ciyaaryahan laga helay Corona